२८ वर्षपछि स्कुले साथी भेट्दा… | eAdarsha.com
२८ वर्षपछि स्कुले साथी भेट्दा…
पाेखरा, ३ चैत । किशोर उमेरमा एसएलसीमा सम्मिलित भएका विद्यार्थीहरुबीच २८ वर्षपछि पुनःर्मिलन भएको छ ।
पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकास्थित भवानी मावि, कुसुमखोलाबाट २०४९ सालको एसएलसी व्याचका विद्यार्थीहरुको बुटवलमा पुनःर्मिलन भएको हो ।
१७ जना उपस्थित भूपू विद्यार्थीहरुको भेलाले कमलप्रसाद नेपालको संयोजकत्वमा भवानी मावि–२०४९ एसएलसी समूह समन्वय समिति गठन गरेको छ ।
समिति सहसंयोजक सरस्वती पराजुली, सचिव डाजेन्द्रप्रसाद नेपाल, कोषाध्यक्ष विमलप्रसाद आचार्य र सहसचिव मञ्जु कुँवर चयन भए ।
सदस्यमा तुलसा थापा, शोभा आचार्य, शंकर ज्ञवाली, मनोज नेपाल, मीनप्रसाद पराजुली, मुकुन्द नेपाल, वोधराज आचार्य, रेखा कार्की कुँवर, कमला लामटाङ्गे, श्रीधर नेपाल, मथुरा पराजुली र सञ्जय आचार्य चयन भए ।
बुटवलस्थित सिद्धार्थ कलेजमा फागुन २८ मा भएको पुनःर्मिलनमा रुपन्देही अलावा पाल्पा, कपिलबस्तु, काठमाडौं लगायत जिल्लाबाट आएका भूपू विद्यार्थीहरु आपसमा स्कुलेजीवन स्मरण गर्दै पुरानो यादमा रमाए र सेल्फी लिए ।
उनीहरुले आफूले पढेको विद्यालय तथा विद्यार्थीलाई सक्दो सहयोग गर्ने, आपसमा दुःखसुख साटासाट गर्दै नयाँ कार्ययोजना साथ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् ।
भूपू विद्यार्थीहरु स्कुलेजीवन स्मरण गर्दै पुरानो यादमा रमाए र सेल्फी लिए
यसैबीच, समन्वय समितिको पहिलो बैठकले भवानी स्कुलकै पूर्व कार्यालय सहयोगी स्व. तीलबहादुर पुन (कान्छा दाइ) का छोरा नारायणलाई स्वास्थ्य उपचारका लागि ५ हजार रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको सचिव डाजेन्द्रप्रसाद नेपालले जानकारी दिए । उनका अनुसार समितिको बैठक प्रत्येक ४ महिनामा पायक पर्ने स्थानमा बस्नेछ ।
संयोजक कमलप्रसाद नेपालले पुराना साथीहरुबीच आपसमा खुसी र उमंग सञ्चार भएको बताउँदै ढिलै भए पनि समिति गठन गर्न सकिएकोमा खुसी व्यक्त गरे ।
कोषाध्यक्ष विमलप्रसाद आचार्यले समितिमा कोष वृद्धि गर्दै विविध कार्यक्रम अघि बढाउने बताए ।
भेलामा बोल्ने अन्य भूपू विद्यार्थीहरुले आफ्नो व्याचका थप विद्यार्थी पनि समेट्दै आगामी दिनमा रचनात्मक कार्यक्रम गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । कुसुमखोलाबाट आएका सञ्जय आचार्यले भेला आयोजना गरेकोमा साथीलाई धन्यवाद दिए । काठमाडौंबाट उपस्थित शोभा आचार्यले यसप्रकारका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
भवानी स्कुल पश्चिम पाल्पामा त्यसबेलाको चर्चित स्कुल हो ।
लुम्बिनी प्रदेश सभा : सांसदबीच चर्काचर्की, विपक्षीले मागे मुख्यमन्त्रीको राजीनामा
विक्रम खड्का जेठ २०, २०७८
बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका विपक्षी दलका सांसदले मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेल नेतृत्वको सरकारलाई बहुमत पुष्टि गर्न चुनौती दिएका छन् । ठिक १…
राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा लुम्बिनीबाट विपक्षी गठबन्धनका पाण्डेय विजयी
आदर्श समाज सम्वाददाता जेठ १७, २०७८
पाेखरा । लुम्बिनी प्रदेशमा आज भएको राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा दृगनारायण पाण्डेय विजयी भएका छन्। उनी विपक्षी गठबन्धनका उम्मेदवार हुन्। पाण्डेयले…
दाङ। लुम्बिनी प्रदेशमा राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि मतदान शुरु भएको छ । निर्धारित समय बिहान ९ बजेदेखि मतदान शुरु भएको हो…
रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशसभाको आठौँ अधिवेशन आह्वान गरिएको छ । प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले यही जेठ १९ गते बुधबार दिउँसो…
लुम्बिनीमा राष्ट्रिय सभा उप निर्वाचन आज : सत्तापक्षलाई लुम्बिनीमा पनि धक्का !
पोखरा । लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गतको राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचन आज हुँदै छ । उपनिर्वाचनमा एमाले र संयुक्त गठबन्धनबाट गरी दुई जनाको उम्मेदवारी परेको…